Banyere ụlọ ọrụ na-egwu mmiri na nnukwu ụlọ akụkọ akụkọ - Great Pool
(Mmalite) NKWUKWU ND SW ỌZỌ NA-EKWU SWLỌ ỌZỌ NA-EGO.
Ná mmalite nke oruru, anyị ụlọ ọrụ, dị ka ọtụtụ nke Chinese ọdọ mmiri akụrụngwa ụlọ ọrụ, nyere ndị ahịa na igwu mmiri ngwa na akụrụngwa. Anyị bụ naanị ezigbo ụlọ ọrụ na-egwu mmiri na-emepụta ihe na soplaya. Ndị ahịa anyị, anyị bụ naanị onye nrụpụta na soplaya, enwere ike dochie ya n'oge ọ bụla.
(GBANWEE) Mee ahịa ahịa, ihe niile bụ ahịa-Centre
N’ehihie Tọzdee, onye ahịa Russia bụ Mazị Vito zigaara onye na-ahụ maka azụmaahịa anyị ozi ma nwee olile anya inweta azịza zuru oke maka ọrụ ebe a na-egwu mmiri. Mgbe anyị nwesịrị nkwurịta okwu dị mfe, anyị haziri nzukọ nke vidiyo nwere oke arụmọrụ ma wepụta ngwa ngwa nke mbụ ya na-enweghị mgbochi asụsụ ọ bụla.
Mgbe naanị awa abụọ nzukọ, Anyị zara ndị ahịa ajụjụ, na-amụta banyere ya miri-larịị mkpa, na kpebisie nke mbido imewe imekọ ihe ọnụ ịkwụ ụgwọ.
Ka oge na-aga, Maazị Vito gwara anyị na ya akpọtụla ọtụtụ ụlọ ọrụ ma wepụta mkpa tupu ha ezigara anyị ozi, mana ha niile nwere adịghị ike dị iche iche. Fọdụ ụlọ ọrụ na-enye naanị ihe eji egwu mmiri, ma ọ bụ naanị ọrụ mmebe, ma ọ bụ naanị Nkwukọrịta China. Ha enweghị ike ijikọ ndị ahịa nke ọma ma ghara inwe ndị ọrụaka aka ọrụ iji nye atụmatụ ihe owuwu yana ọrụ ahịa ahịa.
Anyị bụ ndị kasị anabata na keukwu. Naanị n’ime awa abụọ, anyị edozila ọtụtụ nsogbu ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ kwesịrị ikwurịta maka otu izu ma ọ bụ ọbụlagodi otu ọnwa. Anyị makwaara ihe ọ chọrọ nke ọma ma mee ka ha nwee afọ ojuju maka ọrụ anyị na arụmọrụ ya.
N’ịkọkọta mkpa ndị ahịa ndị si mba ofesi gara aga yana nzaghachi doro anya sitere n’aka ndị ahịa Russia n’oge a, anyị na-amalite ịghọta nke ọma na ọ na-esiri ọtụtụ ndị nwere ike igwu mmiri na-egwu mmiri, ndị ọrụ ngo, na ndị na-ese akwụkwọ aka ịzaghachi ahaziri iche n’akụkụ niile gbasara nka na mmepe. nkwado.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-egwu mmiri ebe a na-egwu mmiri na China nke nwere ike ịnye ngwaahịa, mana enweghị ike inye nkwado ọrụ ọrụ ihe ọmụma; nwere ike inye nkwado nkwado, mana enweghị ike ịnye ngwaahịa na njikọ zuru oke; nwere ike inye nkwado ụlọ, mana enweghị ike ịnye ọrụ ahịa ahịa. Ha nwere nnukwu nkwukọrịta ụgwọ na enweghị ndị otu azụmaahịa na mba ofesi ka ha wee nwee oge na ume ike na nkwukọrịta, na -ebelata arụmọrụ zuru oke.
Ya mere, ụlọ ọrụ anyị malitere ịmalite ngalaba akọwapụtara iji wepụta ikike zuru ezu iji nye ndị ahịa ọrụ ọrụ mmiri zuru ezu.
(UGBU A) Anyị bụ onye na-enye ọrụ na-elekwasị anya na ngbasa ozi zuru oke maka arụmọrụ POOL, na-enye ndị ahịa nwere nkwenye mara mma nke ịhazi ọrụ, imepụta na iwu.
Companylọ ọrụ anyị nwere ndị ọrụ raara onwe ha nye maka nsụgharị zuru oke na-enweghị mgbochi asụsụ ọ bụla
ndi otu ihe eji akwado echiche nke ndu ndu, nchedo gburugburu ebe obibi, ahu ike, na oru oma iji nye nkwado nkwado oru ngo.
The ewu otu na 15 afọ nke oru ngo ahụmahụ wuchaa ọ bụla ewu na mmezi n'ụzọ zuru okè;
Ndị otu ụlọ ọrụ ahụ na ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-aza ajụjụ ọ bụla a na-ere mgbe a na-ere ha n'oge.
Ọrụ ọdọ mmiri niile na-agbaso ụkpụrụ mpaghara niile wee wuchaa oge na mmefu ego.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inyere ndị ahịa nweta ihe ịga nke ọma nke ebe igwu mmiri oru ngo, na-enye keukwu nkwado si imewe, ngwaahịa ọkọnọ na-ewu technology.
Ugbu a, anyị etinyela aka na ihe karịrị 100 ihe ngwọta mmiri ọdọ mmiri na mba 35 na mpaghara gburugburu ụwa gụnyere Thailand, Russia, Uzbekistan, Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia, India, na Saudi Arabia.
Igwu Mmiri Pool, Igwu Pool Ngwọta, Igwu Ulo Okpu, Ọrụ Igba mmiri, Igha mmiri nke Ọha, Rooftop Pool Ngwa,